लूट निर्माता वाग्ले नक्कली नोटसहित पक्राउ, आखिर कुन पासाको डिमाग चलेछ ! - Mero Tribune
Home Uncategorized लूट निर्माता वाग्ले नक्कली नोटसहित पक्राउ, आखिर कुन पासाको डिमाग चलेछ !
प्रहरीले दुई करोड ६० लाख ८६ हजार नक्कली नेपाली नोटसहित तीन दिनभित्र छजनालाई पक्राउ गरेको छ ।
फिल्म निर्माता एवम् वितरण माधव वाग्लेसहित ६ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । प्रहरीले वाग्लेसहित महेन्द्र वोगटी, सुजित तामाङ, साजन तामाङ, प्रकाश सुवेदी, विकेश नापितलाई पनि हिरासतमा लिएको छ । उनीहरुबाट २ करोड साठ्ठी लाख त्रिसठ्ठी हजार रुपैयाँ बराबरको नक्कली नेपाली रूपैयाँका नोट समातिएको छ ।
लूट, लूट २ जस्ता हिट चलचित्र बनाएर चर्चा कमाएका वाग्लेको आखिर कुन डिमागले काम गरेछ । उनकै डिमाग कि पासाको ?
Previous articleरेस ३ ट्रेलर समिक्षा : खल्लो चियाजस्तो
Next articleस्थानीय कलाकार लाहुरे र बिपुलको अन्तर्राष्ट्रिय कलाकार डिप्लो र मोसँग सहकार्य